iPh7Plus 256GB / Samsung S8 Black အား မန္တလေး တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
iPh7Plus 256GB / Samsung S8 Black
Apple ချစ်သူတေအတွက် Memory 256GB နဲ့
iPhone7Plus ဈေးတန်တန်လေးတေပါ
အားသွင်းကြိုး နားကြပ် မသုံးရသေး
Original ဘူးပစ္စည်းအစုံ Error လုံးဝမရှိ
Finger Print Good . Battery Good
Samsung S8 Black အလုံးသန့်သန့်လေးပါ
မြန်မာစာ Official ပါ .PH Only
Eye Scan . Face Scan Finger Good
Error လုံးဝမရှိပါ .
အမည်: iPh7Plus 256GB / Samsung S8 Black